Thenga i-Stand Collar Puff Sleeve Slim Fit Ladies Lace Blouse - Ukuhanjiswa kwamahhala futhi akukho ntela | WoopShop®
Ifana nesithombe futhi ikhwalithi yaso yinhle
Izinto zokwenziwa ezinhle. Ihembe ihlelwe kahle. Ku-OG 95 kuhlale kahle, izinkinobho bezingafani. Iqiniso cishe aligcizeleli okhalweni (kusuka ku-74) futhi ngasikhathi sinye licishe liqine okhalweni (cishe i-105). Emikhonweni kukhona ibhande lokunwebeka. Uma kungenjalo izandla ezincane-zinganamathela. Ngiyithathe izikhathi ezingu-1-2. Kwaneliseke impela. Kube nephunga elincane ngemuva kokuhlolwa kwesidumbu, ngemuva kwemizuzu engu-5 singasekho.
Imikhono iyesabeka, ekubukekeni okubukhoma njengezingxenye ezi-2 ezivela kwimikhiqizo ehlukene exhunywe ndawonye. On ihembe indawo egqwalile, encane kakhulu, kodwa endaweni evelele